Imibongo ka-Antonio Machado, ongomnye wabameli beSpain | Uncwadi lwangoku
Umzobo ka-Antonio Machado.
UAntonio Machado Ruíz wayengumSevillian onesiphiwo esingachazekiyo, umbongo wakhe wawuyinxalenye yesizukulwana se-1898 eSpain. Le mbongi Wazalwa ngoJulayi 26, 1875, umntakwabo Manuel Machado, ikwangumbongi owayekunye naye de kwaba ngumhla wokufa kwakhe eCollioure, eFrance ngoFebruwari 22, 1939.
Ubomi buka-Antonio baseyunivesithi babuphawulwa yimpembelelo yootitshala bakhe, awayebagcinele uthando nothando olukhulu. Nangona kunjalo, umbhali akazange azive ekhululekile kwikholeji okanye esikolweni; Kwimbali yakhe uvumile: "Andinamkhondo ngaphandle kokuyicaphukela yonke into yokufunda."
1 Ubuntwana bakhe kunye nemibongo kaMachado
2 Imisebenzi yakhe yokuqala
3 Umbhali omnye, iintshukumo ezintathu
4 Uthando lobomi bakhe
5 Icawa, ngokukaMachado
6 Imibongo ka-Antonio Machado
6.1 Kwi-elm eyomileyo
6.2 Buphi ubomi bam ...
6.3 Ubugcisa bemibongo
6.4 Ndiphuphe undithatha
7 ISpain kaMachado
8 Ilifa lakhe
Ubuntwana bakhe kunye nemibongo kaMachado
UAntonio ubonakalise kwimisebenzi yakhe iinkumbulo zobuntwana bakhe, ukuhamba kwakhe, uthando kunye nokuzonwabisa, enye yazo yayiyi "Inkumbulo yobuntwana", kwenye yeencwadi zakhe zemibongo. Ngexesha leminyaka yokuqala yobomi bakhe uMachado oselula waphila amaxesha akhethekileyo awabhala ngokungafiPhakathi kwaba kukho inani likayise owayekade eseofisini yakhe, kunye neendawo awayehlala kuzo ngeentsuku zakhe ezimsulwa.
Mkhuba poetic yala maxesha oko kwaphawulwa umsebenzi yombhali. Ekuqalekeni kwayo Antonio UMachado wayesebenzisa ukubhala ngendlela engacacanga kunye necacileyo. Ubunzima, ingqokelela yemibongo eyapapashwa ngo-1903, yazisa italente eyayinayo uAntonio.
Iindawo zeCastile yincwadi yemibongo eyapapashwa ngo-1912, apho kuchazwa ubunjani baloo mihlaba, ichaza inyani ebuhlungu. Ngokucacileyo iMachado ibonakalise iimvakalelo zakhe ngeSpain, intlungu yokusweleka komfazi wakhe kunye neminqweno ekufuneka enayo ngaphambili, njengoko yavelisa ithemba kwimibhalo emininzi.
Umbhali omnye, iintshukumo ezintathu
Iimpawu zala maxesha zazibonakala: Ubuchule bokuyila, ubunyibiliko kunye nolwimi olunobungangamsha nolwahlukileyo, nalapho ezona nkcukacha zincinci zaye zaqwalaselwa, zazingumbhali wazo. Ekuqaleni kobomi buka-Antonio Machado njengombhali kwakukho imibongo enxulumene nale ntshukumo, enje Ubungangamsha, iigalari kunye neminye imibongo (1919).
Wayiphatha into yokuthandana kunye nengcinga yakhe enzulu, efumana ukubanjwa kwamazwi aphumeleleyo umtsalane wendalo kunye nobumnyama bawo.. I-Nostalgia, eyokuqala kunye ne-utopia ziimpawu zalo mkhwa wokubhala kwaye yayisisiseko sokwenza imveliso kaMachado; iphefumlelwe yiSpain kunye nothando lomfazi wakhe, uLeonor.
Isimboli kunye nemibuzo yayo malunga nezinto esele zikho nazo zilawulwa. Ngezixhobo ezifana ne-synesthesia, wazama ukugcina umculo kwiivesi zakhe. UMachado wayesondele kakhulu kwesi sitayile, uninzi lwemibhalo yakhe yangqina ubungqina bakhe kwaye usenokufundwa ngokumnandi.
Uthando lobomi bakhe
Wayengutitshala okwexeshana eSoria, kwaye apho, ngo-1907, wadibana nothando lobomi bakhe, Oku kwakunjalo ULeonor Izquierdo, umfundi omncinci oneminyaka elishumi elinethoba omncinci. Emva kweminyaka emibini bethandana, uMachado no-Izquierdo batshata; nangona kunjalo, ngo-1912, le ntokazi yabulawa sisifo sephepha.
Antonio Wazinikela kwimibongo emininzi kuye, Ngexesha lokugula, ngexesha lokubhubha nasemva kwalo. "Kwi-elm eyomileyo" yayingumbongo apho wayelangazelela ukuba uLeonor aphucule impilo yakhe nakwi "A José María Palacio" wamkhumbula ecaleni kwendawo awayephumle kuyo kwaye wacenga omnye wabahlobo bakhe ukuba amhloniphe ngokuzisa iintyatyambo.
UAntonio Machado wayecinga nzulu, iimvakalelo zakhe kunye nokuqonda kwakudlulela ngaphaya kwalawo ababhali belo xesha. Wayeyindoda eyabuza, waziva ngaphambi kwexesha lakhe, wayengavumelani namaqhina okanye iimfundiso, obangele ukuba umsebenzi wakhe ube nexabiso elikhethekileyo.
Kangangeenkulungwane icawe ibinemithetho ekufuneka bayilandele abathembekileyo ukuba bangabayo kwaye uMachado akazange ayamkele, kwanaxa ukholo lwakhe lwalukuThixo. Ngokomlobi, ukuzila ukutya, iipenins kunye nabanye Iimbopheleleko ekufuneka zilandelwe ngumfundisi yayingezizo iindlela zokufundisa abantu; nangona kunjalo, kwi "Profession of Faith" ubonakalise uthando olukhulu awalubonayo kuMdali.
Nantsi isampulu yemibongo emele kakhulu ka-Antonio Machado:
ekhotha iDuero! Ubulembu
kumboko obolileyo nothuli ...
Isiqwenga senye yemibongo ka-Antonio Machado.
Buphi ubomi bam ...
Xa bubomi bam
konke kucacile kwaye kulula
egcwele ilanga nengoma.
Kwaye xa ihluma kum
iya kuba nguwe, ubomi bam,
Umbongo wam omtsha ...
Kwaye umphefumlo uphela kukho iqela elinye
Uyazi kuphela, uthando lwesithunzi,
iphupha elimnandi, emva koko ... akukho nto; amathumba,
Ephukile kwisipili sakho i-idyll yakho ebalaseleyo,
Wabuya ubomi bakhe,
Kufuneka ube ngumthandazo wakho wasekuseni:
Owu, ukuxhonywa, usuku oluhle!
phantsi indlela emhlophe,
embindini wentsimi eluhlaza,
kusasa okunqabileyo ...
Babelilizwi lakho nesandla sakho,
emaphupheni, ayinyani! ...
Ithemba eliphilayo ngubani owaziyo
yintoni le iginya umhlaba!
U-Sevillian wayenothando olukhulu kwilizwe lakhe, ngenxa yoku wanikezela eminye imibongo ngo Iindawo zeCastile. Nangona kunjalo, U-Antonio uvakalise ukungoneliseki kwakhe luphuhliso oluncinci lwemimandla yasemaphandleni. Umbhali uthethe ngokunqongophala kwezicwangciso kwicala likarhulumente zokwenza ukuba iindawo zasemaphandleni ziguquke kwaye inkqubela phambili yabo ibe kwinqanaba elifanayo nelezidolophini.
Ngelo xesha, inani labemi baseSpain ababephila ubomi babo ezilalini babedla ngokuncamathisela kwiingcambu zalo. Uninzi lwaba bemi khange bayithathele ingqalelo imbono yokutshintsha ubomi babo bemihla ngemihla, oko kukuthi, ukongeza kwezopolitiko abangancediyo, abahlali babengenamdla wokuvela. UMachado uqinisekisile ukuba ukuswela isibindi kunye nomnqweno wokuqhubela phambili zezona ngxaki ziphambili kuluntu lwexesha lakhe.
UAntonio Machado ebudaleni bakhe.
Amaziko kwihlabathi liphela, njenge-Hispanic Institute eMelika, anike uMachado ukwamkelwa ngokufanelekileyo. Yintoni egqithisile, imisebenzi yakhe yaguqulwa yenziwa yimveliso zomculo Ngu-Manuel Serrat, umbhali-umbhali-wengoma ovelise icwecwe elinesihloko Kunikezelwa kuAntonio Machado, apho ukubhala kweSevillian kwenzeka ebomini. Akukho nto ngembongi phakathi kwe iimbongi ezinkulu zoncwadi.
UAntonio Machado wayeyindoda eyayicacile malunga nesibongo sakhe, babeyazi indlela yokubamba iinkolelo zabo, ukungahambelani kunye namava abo obomi ngendlela eyahlukileyo ethembekileyo. Nangona wayephila ngexesha apho kwakukho ubandlululo oluninzi, wayengoyiki ukuveza inyani nobuntununtunu bakhe elizweni, oku kukhokelela kwimibongo enje ngala: "Buphi ubomi bam", "Mhlawumbi", "Ubongo lwemibongo" kunye "Nam ndiphuphe ngathi undithatha ”.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » Imibongo ka-Antonio Machado